Madaxweyne Gaas Oo daah-furay mashruuca caafimaadka aasaasiga ah ee gobolada Bari iyo Gardafuu. – SBC
Madaxweyne Gaas Oo daah-furay mashruuca caafimaadka aasaasiga ah ee gobolada Bari iyo Gardafuu.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta ku daah-furay magaalada Boosaaso mashruuca caafimaadka aasaasiga ah ee gobolada Bari iyo Gardafuu Puntland.
Daah-furka Mashruucani ayaa waxaa Madaxweynaha ku wehelinaayey Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Puntland iyo madaxda kale ee Wasaaraddaasi, masuuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda Puntland, masuuliyiin ka tirsan Madaxtooyada Puntland, Xubno ka socdey hay’adda Save the Children , Isimo, aqoon yahano, ururrada haweenka iyo masuuliyiin kale.
“Runtii waxaan rabaa marka hore inaan aad u bogaadiyo shaqada wanaagsan ee ay hayaan Wasaaradda Caafimaadka iyo madaxdeedu, way muuqataa waxay tahay Wasaaradda Caafimaadku, waxayna ka mid tahay Wasaaraddaha aanu kufaano oo si wanaagsan dalka uga shaqeeyey, dedaalka ay muujiyeen iyo isbedelka maanta ka muuqda Puntland dhanka Caafimaadka shaqaday ka qabteen aad bay u mahadsan yihiin” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
“Waxaa dheer shaqada caadiga ah marka laga soo tago, dhib kasta oo timaadda, culay kastoo yimaadda oo dhanka nabad gelyada ahna qayb lixaadle bay ka qaataan, cidda ugu horaysa ee meeshaa tegaysaa oo aadaysaa waa Wasaaradda Caafimaadka, waan bogaadinayaa, waxaan leeyahay Hambalyo ( Congratulation) shahaadadii Abaarta iyo middii Al-shabaab ladirirkaba waa laydin siinayaa labadaba” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in siyaasadda dawladdu ay tahay in qofkasta oo Puntland jooga Miyi, Tuulo, Magaalo, Buur iyo Banaanba in uu hello Caafimaad joogto ah, Waxbarasho, iyo jid aada meesha uu joogo, taasina ay tahay siyaasad iyo daw ay u sii jeexayso Xukuumadda uu hogaaminayaha ka yahay Madaxweynaha Puntland, dawladdaha danbe ee Puntland qaban doona.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa digniin adag u diray shakhsiyaadka carqaladaynaya mashaariicda horumarineed ee dalka ka socda, kuwaas oo muhiim u ah mustaqbalka shacabka iyo Xukuumada Puntland.